प्रभु येशूका विरुद्धमा भएकाहरूलाई हामी घृणा गर्छौं; तिनीहरू सबैका अन्त्य विनाश नै हुनेछ। प्रभु येशू मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनी विश्‍वास नगर्न कसले तिनीहरूलाई भन्यो? अवश्य पनि, संसारका मानिसहरूप्रति करुणामय हुनुभएका प्रभु येशूलाई अनुकरण गर्ने समयहरू छन्, किनकि तिनीहरूले बुझ्दैनन्, र हामी तिनीहरूप्रति सहनशील र क्षमाशील हुनु ठीक हो। हामीले गर्ने सबै कुराहरू बाइबलका वचनहरू अनुसार हुनुपर्छ, किनकि बाइबल अनुरूप नहुने कुनै पनि कुरा शास्‍त्र-विरोधी वा झूटा शिक्षा हो। यस किसिमको विश्‍वासले हामी प्रत्येकका मनमा गहिरो किसिमले जरा गाडेको छ। हाम्रा प्रभु बाइबलमा हुनुहुन्छ, र यदि हामी बाइबलबाट विचलित भएनौं भने, हामी प्रभुबाट पनि अलग हुनेछैनौं; यदि हामी यस सिद्धान्तमा रह्यौं भने, हामीले मुक्ति पाउनेछौं। हामी एक-अर्कालाई प्रेरणा दिन्छौं, एउटाले अर्कोलाई सहायता गर्छौं, र हरेक पल्ट हामी एकसाथ भेला हुँदा, हामीले भनेका र गरेका सबै कुराहरू प्रभुको इच्छाअनुसार छन् र प्रभुले यसलाई स्वीकार गर्नुहुनेछ भनी हामी आशा गर्छौं। हाम्रो अत्यन्त प्रतिकूल परिवेश हुँदाहुँदै पनि, हाम्रा हृदयहरू आनन्दले भरिएका छन्। सहज पहुँचमा भएका हाम्रा आशिषहरूलाई हामीले विचार गर्दा, के हामीले पन्छाउन नसक्ने कुनै कुरा छ र? अलग हुनका लागि हामीले सङ्कोच मान्नुपर्ने कुनै कुरा छ र? यी सबै कुराहरू स्पष्ट छन्, र यी सबै कुराहरू परमेश्‍वरका चनाखा आँखा सामु नै छन्। गोबरको थुप्रोबाट उठाइएका खाँचोमा परेका मुठ्ठीभरका हामीहरू, उठाइ लगिने वा, आशिषित हुने, र सबै राज्यहरूमाथि शासन गर्ने गरेको सपना देख्ने, प्रभु येशूका अरू साधारण अनुयायीहरू जस्तै छौँ। हाम्रा भ्रष्टता परमेश्‍वरका दृष्टिमा खुला राखेका छन्, अनि हाम्रा अभिलाषाहरू र लोभहरू परमेश्‍वरका दृष्टिमा दोषी ठहरिएका छन्। तथापि, यी सबै थोकहरू यति सामान्य रूपमा र यति तर्कसंगत किसिमले हुन्छन्, कि हाम्रा तीव्र इच्छाहरू ठीक छन् वा छैनन् भन्ने बारेमा हामी कोही पनि अचम्ममा पर्दैनौं, हामीले अवलम्बन गरेका सबै थोकको विशुद्धतामाथि शङ्का गर्ने कुरा त परै जाओस्। कसले परमेश्‍वरको इच्छालाई जान्न सक्छ? खास कस्तो किसिमको मार्गमा मानव हिँड्छ, हामीले खोज्न वा अन्वेषण गर्न जान्दैनौं; अनि सोधपूछ गर्नमा पनि हाम्रो चासो झनै कम छ। हामीलाई उठाइ लगिन्छ कि उठाइ लगिँदैन, हामीले आशिष् पाउन सक्छौं कि पाउँदैनौ, स्वर्गको राज्यमा हाम्रा लागि कुनै स्थान छ कि छैन, जीवनको नदीको पानी र जीवनको रूखको फलमा हाम्रो हिस्सा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा मात्र हामी सरोकार राख्छौं। के यी नै कुराहरू पाउनका खातिर हामीले प्रभुमा विश्‍वास गरेका र उहाँका अनुयायीहरू बनेका होइनौं र? हाम्रा पापहरू क्षमा भएका छन्, हामीले पश्‍चाताप गरेका छौँ, हामीले दाखमद्यको तीतो कचौरा पिएका छौँ, अनि हामीले हाम्रो क्रूसलाई पीठमाथि राखेका छौँ। हामीले तिरेको मूल्य प्रभुले स्वीकार गर्नुहुन्न भनी कसले भन्न सक्छ? हामीले पर्याप्त तेलको तयारी गरेका छैनौं भनी कसले भन्न सक्छ? हामी ती मूर्ख कन्याहरू वा ती त्यागिएकाहरू मध्येका जस्ता हुन चाहँदैनौं। यसका साथसाथै, झूटा ख्रीष्टहरूद्वारा छलमा नपर्नका लागि हामीलाई सुरक्षित राख्न हामीले प्रभुलाई बिन्ती गर्दै, निरन्तर प्रार्थना गर्छौं, किनकि बाइबलमा यसो भनिएको छ: “अनि यदि कुनै मानिसले तिमीहरूलाई, हेर, ख्रीष्ट यहाँ हुनुहुन्छ वा त्यहाँ हुनुहुन्छ भनी भन्छ भने विश्‍वास नगर्नू। झूटा ख्रीष्टहरू र झूटा अगमवक्ताहरू आउनेछन् र ठूलठूला चिन्हहरू र चमत्कारहरू देखाउनेछन्; ताकि सम्भव भए, तिनीहरूले चुनिएकाहरूलाई नै छल्नेछन्” (मत्ती २४:२३-२४)। हामी सबैले बाइबलका यी पदहरूलाई कण्ठस्थ गरेका छौँ; हामीले तिनीहरूलाई हृदयले चिन्छौं, र हामीले तिनीहरूलाई बहुमूल्य सम्पत्तिको रूपमा, जीवनको रूपमा, र हामीले मुक्ति पाउन सक्छौं वा सक्दैनौं वा उठाइ लगिन्छ वा लगिँदैन भनी निर्णय गर्ने श्रेय पत्रका रूपमा हेरेका छौँ …
परमेश्‍वरका वचनहरूमध्ये प्रत्येकले हामीलाई घाइते बनाएर डरले भरेर छोडिदिँदै, हाम्रा मरणशील बिन्दुहरू मध्ये एउटामा प्रहार गर्छन्। उहाँले हाम्रा धारणाहरू, हाम्रा कल्पनाहरू, र हाम्रा भ्रष्ट स्वभावलाई खुलासा गर्नुहुन्छ। हाम्रो लाजलाई कुनै लुक्ने ठाउँ नराखिकन हामीलाई डर र त्रासको अवस्थामा राखेर, हामीले भन्ने र गर्ने कुराहरूदेखि, हाम्रा प्रत्येक विचारहरू र धारणाहरूसम्म, हाम्रा प्रकृति र सार उहाँका वचनहरूमा प्रकट हुन्छन्। हाम्रा सबै दयनीय असिद्धतालाई खुलासा भएको महसुस गराएर र पूर्ण रूपमा राजी गराएर, उहाँले हाम्रा सबै कार्यहरू, हाम्रा लक्ष्यहरू, र नियतहरू, र हामीले कहिल्यै पत्ता नलगाएका हाम्रा भ्रष्ट स्वभावका बारेमा पनि एक-एक गरेर बताउनुहुन्छ। उहाँको विरोध गरेमा उहाँले हाम्रो न्याय गर्नुहुन्छ, उहाँको निन्दा गरेकोमा र उहाँलाई दोष लगाएकोमा हामीलाई सजाय दिनुहुन्छ, अनि उहाँका नजरमा हामीसँग मुक्ति पाउने एउटा पनि विशेषता छैन कि हामी जीवित शैतान हौँ भन्ने हामीलाई अनुभूत गराउनुहुन्छ। हाम्रा आशाहरू चकनाचूर हुन्‍छन्; उप्रान्त उहाँबाट कुनै पनि अनुचित मागहरू गर्ने वा उहाँको बारेमा कुनै परिकल्‍पना बोकेर हिँड्ने आँट गर्दैनौं, अनि हाम्रा सपनाहरू पनि रातारात हराउँछन्। हामी कसैले पनि कल्पना गर्न नसक्ने र हामी कसैले पनि स्वीकार गर्न नसक्ने तथ्य यही हो। एकै क्षणमा, हामी हाम्रो भित्री सन्तुलनलाई गुमाउँछौं र अगाडि अवस्थित बाटोमा कसरी निरन्तरता दिने भनी वा हाम्रो विश्‍वासमा कसरी अघि बढ्ने सो जान्दैनौं। हाम्रो विश्‍वास पहिलेकै क्षेत्रतिर फर्केर गएको जस्तो देखिन्छ, र हामीले कहिल्यै प्रभु येशूलाई नभेटेको वा उहाँलाई नचिनेको जस्तो देखिन्छ। हाम्रा आँखा अगाडिका सबै कुराहरूले हामीलाई अन्योलताले भर्छ र हामीलाई अनिर्णायक किसिमले ढुलमुले बनाउँछ। हामी उदास हुन्छौं, हामी निराश हुन्छौं, र हाम्रा हृदयहरूका गहिराइमा अदम्य रीस र अपमान हुन्छ। हामीले निकाल्ने प्रयास गर्छौं, निकास दिन खोज्छौं र, यसको अलाबा, हामी हाम्रा मुक्तिदाता येशूलाई निरन्तर पर्खिरहन्छौँ ताकि हामीले हाम्रा हृदयका कुराहरू उहाँमा पोखाउन सकौं। हामी बाहिरपट्टि सहज भएको देखिने समयहरू भए पनि, न त घमण्डी, न नम्र, हामीले पहिले कहिल्यै अनुभूति नगरेका हारको भावनाले हाम्रा हृदयमा हामी ग्रसित हुन्छौं। कहिलेकाहीँ हामी बाहिरपट्टि असामान्य रूपमा शान्त देखिए तापनि, हाम्रा मनहरू समुद्री आँधी जस्तै पीडाले मडारिरहेका हुन्छन्। उहाँका न्याय र सजायले हाम्रा फजुल चाहनाहरूलाई अन्त्य गर्दै र उहाँ हाम्रा मुक्तिदाता हुनुहुन्छ र हामीलाई मुक्त गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भनी विश्‍वास गर्न हामीलाई अनिच्छुक छोडिदिँदै, हाम्रा सबै आशाहरू र सपनाहरूबाट हामीलाई वञ्चित गर्छन्। उहाँका न्याय र सजायले हामी र उहाँका बीचमा एक खाल्डो बनाएका छन्, यो यति गहिरो छ कि कोही पनि यसलाई नाघेर जान इच्छुक हुँदैन। उहाँका न्याय र ताडनालाई हामीले हाम्रा जीवनमा पहिलो पल्ट यति ठूलो अवरोध, यति ठूलो अपमानको रूपमा भोगेका छौँ। उहाँका न्याय र सजायले हामीलाई परमेश्‍वरको सम्मान र मानिसको अपमानको असहिष्णुताको सराहना गर्ने बनायो, यसको तुलनामा हामी अत्यन्त तुच्छ र अशुद्ध छौ। हामी कति घमण्डी र अहङ्कारी छौँ, र मानिस कसरी कहिल्यै परमेश्‍वरको बराबरी हुन सक्दैन, वा परमेश्‍वरसँग समान हुन सक्दैन भनी उहाँका न्याय र सजायले हामीलाई सर्वप्रथम महसुस गर्ने बनाएको छ। उहाँका न्याय र सजायले यस्तो भ्रष्ट स्वभावमा अझै नजिउन, यस प्रकृति र सारबाट जतिसक्दो चाँडो आफैलाई स्वतन्त्र पार्न, र उहाँप्रति दुष्ट र घृणित नहुनका लागि हामीलाई इच्छुक नहुने बनाएको छ। उहाँका न्याय र सजायले उहाँका योजनाहरू र प्रबन्धहरूका विरुद्धमा अब कुनै विद्रोह नगरीकन उहाँका वचनहरूलाई पालना गर्न हामीलाई खुशी पारेको छ। उहाँका न्याय र सजायले फेरि एक पल्ट हामीलाई बाँच्ने इच्छा दिएका छन् र उहाँलाई हाम्रा मुक्तिदाताका रूपमा स्वीकार गर्न हामीलाई खुशी बनाएको छ…। हामी विजयको कामबाट बाहिर, नरकबाट बाहिर, मृत्युको छायाको घाटीबाट बाहिर निस्केका छौँ…। सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरले हामीलाई, मानिसहरूका यो समूहलाई पाउनु भएको छ! उहाँले शैतानलाई जित्नुभएको छ र उहाँका शत्रुहरूका भीडलाई हराउनु भएको छ!